Imisa Weji Ayuu Qofku Xasuusan Karaan Noloshiisa? – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Imisa Weji Ayuu Qofku Xasuusan Karaan Noloshiisa?
Imisa Weji Ayuu Qofku Xasuusan Karaan Noloshiisa?
Daraasad cusub oo dhawaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in tirada wejiyada ay dadku xasuusan karaan saacaddii ay gaari karto 362 weji, halka sida dhex dhexaadka ah ay dadku xasuustaan 290 weji saacaddii.
Culumada psychology ku takhasustay ee daraasaddan sameysay, ayaa waxey soo hindiseen waddo lagu qiyaasi karo, tirada wejiyada uu qofku xasuusan karo, Dr. Rob Jenkins oo ka tirsan qeybta Psychology-ga ee Jaamacadda York, ayaa yiri: “Daraasaddeenan waxaan xoogga ku saarnay tirada wejiyada ay dadku si dhab ah u aqoonsan karaan, weli ma aanan helin tirada wejiyada suuraggalka ah ee maskaxdu ay si dhab ah ula mucaamili karto.”
Waxa uu intaa sii raaciyay: “Awoodda kala soocidda dadka kala duwan muhiimad weyn ayay leedahay, waxaad la socon kartaa dhaqanka dadkaas marka uu waqti ka soo wareego, adigoo dhaqankaa bedelay si aad ula jaanqaaddo arrintaa.”
Kooxdan khubarada ah ee ka tirsan jaamacadda York, ayaa waxey horumarin ku sameeyay qalab lagu dhisay Theory-ga lagu magacaabo “Garasho iyo Xasuus“, taas oo muujisay in ka qeybgalayaashii oo dhan ay bilowgii hore xasuusteen wejiyo badan oo ka mid ah dadkii ay garaneyeen, sida; kuwa dadka ku hareeraysan, dadka caanka ah iyo siyaasiyiin, laakiin, waxaa ku adkayd iney xasuustaan wejiyo cusub dhammaadka saacadda maskaxtuujiska ah ee xasuusta ay ku jireen, isbedelka qofka ku yimid ayaa khubarada u saamaxayn iney qiimeeyaan waqtiga ay xasuusta wejiyada ay qofka ka dhammaaneyso ee aanuu wejiyo cusub xasuusan karin.
Khubaradu waxey ogaadeen in dadku ay xasuusan karaan inta u dhaxeysa 1000 ilaa 10,000 oo weji, natiijooyinka la gaaray waxey caddeynaysaa, awoodda qofka caadiga ah uu u leeyahay inuu xasuusto ku dhawaad 5000 oo weji oo saaxiibbada, qoyska iyo dadka caanka ah ka mid ah, laakiin dadka awooddooda garashada ay xoog badan tahay, waxey xasuustaan 10-kun oo weji.
Dr. Jenkins, waxa uu caddeeyay in kala duwanaanshiyaha dadka ee dhanka xasuusta wejiyada loo aaneyn karo, kala duwanaashiyaha xasuusta wejiyada oo aan laga sinneyn, waana arrin ku xiran muhiimadda ay dadku siiyaan wejiyada iyo sida ay u dhiraandhirin karaan macluumaadka si mug leh.
Dr. Jenkins waxa uu yiri: “Waxaa muhiimad gaar ah leh inaan ogaanno in ay jirto da’ goonni ah oo qofku marka uu gaaro ay xasuusta wejiyada ay tahay marka ay ugu sarreyso, waxaa dhici karta in qofku marka uu weynaado uu wejiyo badan xasuusan karo ama uu iloobi karo kuwo badan oo ka mid ah dadkii uu horey u yaqaannay.”
Previous articleFaah faahin laga bixiyay Xariga Xildhibaan Dhakool
Next articleWararka maanta:13 argagixiso oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Punt land
Arinka Caruurtu Waa Ku Dayasho ?
Qiso: camal la’aantu ka dhigtey maal qabeen
Dariiqa Gaadhidda Guusha
Guurka Iyo Caadooyinka Cajiibka Ah
6 Faa’iido oo Yididiiladu u leedahay Nolosha Ragga iyo Dumarka